कारखाना सिलिकॉन कार की कुञ्जी गोल्फ7को लागी
विवरण:सिलिकन कार कुञ्जी कास,गोल्फ7कार कुञ्जी आवरण,गोल्फको लागि सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
Home > उत्पादनहरू > VW सिलिकॉन कुञ्जी आवरण > कारखाना सिलिकॉन कार की कुञ्जी गोल्फ7को लागी
मोडेल संख्या: BE-VWgolf
सुन्दर पृथ्वी प्राधिकरणमा सिलिकॉन कार की कुञ्जी7वर्षको लागि आवरण हुन्छ , VW सिलिकन कुञ्जीपाटीमा especail । VW गोल्फ7कार कुञ्जी आवरण VW सिलिकॉन कार की कुञ्जी को सबै भन्दा ठुलो बिक्रि को एक हो । जर्मनी जस्तै पश्चिमी युरोप देशहरूमा यो धेरै लोकप्रिय छ। ह्यान्डकॉमसँग VW गोल्फ7कार कुञ्जी आवरण र धेरै स्पष्ट बटनहरूसँग, यो धेरै सुन्दर देखिन्छ। यदि तपाइँ यसलाई प्रयोग गर्न किन्नुहुन्छ भने, तपाईलाई धेरै मन पर्छ।
प्रत्येक सिलिकॉन कार कुञ्जी आवरणले निम्न विशेषताहरू पार्यो:
1. 100% सिलिकॉन बनाइएको।
2. कार की कुञ्जी तपाईंको कार कुञ्जीको लागि पूर्ण रूपमा उपयुक्त छ।
5. तापमान दायरा: -40 सेन्टिग्रेड ~ 230 सेन्टीग्रेड
प्रत्येक सिलिकॉन कार की कुञ्जी 100% सिलिकॉन द्वारा बनाइयो, तिनीहरू कुनै हानिकारक, नरम र पर्यावरणगत अनुकूल छैनन्। त्यसोभए जब तपाईं तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईलाई राम्ररी महसुस गर्नुहुनेछ, र राम्रो छुनु हुन्छ। प्रत्येक बटनहरू र होलहरू मूल कार कुञ्जी 100% फिट छन्, कुञ्जीमा कार कुञ्जीहरूसँग पूर्ण कुञ्जी समावेश गर्दछ। प्रत्येक कार की कुञ्जीले क्यूए र ​​क्यूसी विभाग द्वारा परीक्षा पार गर्यो। र हाम्रो सबै उत्पादनहरु को SGS र एफडीए प्रमाणपत्र छ।
साथै प्रत्येक सिलिकॉन कार कुञ्जी का मामला हीट प्रतिरोधी, पनरोक, धूल प्रमाण हो। अनावश्यक र टिकाऊ। कार प्रमुख कवर, आफ्नो कार प्रमुख रक्षा गर्न सक्छन् पनि आफ्नो कार प्रमुख थप सुन्दर बनाउन सक्छ।
प्रत्येक ब्रान्डहरू कार कुञ्जी समावेश गर्दछ हामी तपाइँका लागि 12 भन्दा बढी रङहरू, रातो, कालो, समुद्री नीलो, आकाश निलो, गुलाबी, रातो गुलाब, सुन्तला, निर्णय, सेतो हरियो, पहेंलो, खैरो, कफी, सेतो र यतिको लागि प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं आफ्नो कम्पनीको लग इन वा तपाईंको लोगोलाई आवरणमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंको लागि यो गर्न सक्छौं। तपाईको लोगो कार की कुञ्जी कवरको साथ अधिक अनोखा र आकर्षक देख्छ। हामी सबै ब्राण्ड कार कुञ्जी आवरण गर्दछौं । कुनै पनि पीएमएस रंग, अनुकूलित डिजाइन र आकारहरू स्वीकार्य छन्। हामी7वर्षको लागि OEM र ODM कारखाना हो, हामीसँग3डी डिजाइनर र मोडल विभाग हो जुन तपाइँको लागि डिजाइन गर्न।
हाम्रा उत्पादनहरू लोकप्रिय र विश्वसनीय छन्। हामी विदेशीहरु संग7वर्ष को लागि सहयोग गर्छौं, हामी हरेक ग्राहकहरु लाई ईमानदारी गर्दछौं, र उनलाई हरेक सिलिकॉन कार कुञ्जी आवरणको उच्च गुण प्रदान गर्दछौं । र हामी तपाईंलाई सेवाको लागी सर्वोत्तम सेवा दिन सक्छौं। यसैले यदि तपाइँसँग कुनै पनि आवश्यकताहरू मलाई सम्पर्क गर्न सक्दछ भने, हामी तपाईंसँग राम्रो सहयोग स्थापित गर्न इच्छुक छौं।
कार नयाँ शैली कार कुञ्जी आवरणका लागि VW अब सम्पर्क गर्नुहोस्
2019हट बिक्री कार वीवा प्रमुख सुरक्षात्मक उपकरण अब सम्पर्क गर्नुहोस्
कारको लागि VW Fob कार कुञ्जी शेल अब सम्पर्क गर्नुहोस्
अमेजन गरम बिक्री कार कुञ्जी धारक वी अब सम्पर्क गर्नुहोस्
3 बटन कार कुञ्जी आवरणका लागि Vw अब सम्पर्क गर्नुहोस्
दूरभाषी फ्लिप कुञ्जी फोब शेलका लागि अब सम्पर्क गर्नुहोस्
2019कार कुञ्जी आवरणका लागि VW अब सम्पर्क गर्नुहोस्
Vw को लागि कार कुञ्जी आवरण वालेट अब सम्पर्क गर्नुहोस्
सिलिकन कार कुञ्जी कास गोल्फ7कार कुञ्जी आवरण गोल्फको लागि सिलिकॉन कुञ्जी आवरण3सिलिकॉन कार कुञ्जी कास सिलिकन कार कुञ्जी केस VW सिलिकन कार कुञ्जी3बटन सिलिकन बुइक कुञ्जी कास सिलिकॉन Peugeot कार कुञ्जी कास